Madaxweyne Farmaajo oo aan ka qeybgali doonin shirka IGAD ee maanta ka furmaya Addis Ababa – idalenews.com
Madaxweyne Farmaajo oo aan ka qeybgali doonin shirka IGAD ee maanta ka furmaya Addis Ababa
Magaalada Addis Ababa ayaa lagu wadaa in maanta oo Isniin ah uu ka furmo shir ay ka qeybgali doonaan madaxda urur gobolleedka IGAD oo looga arinsanayo xaalada dalka Koonfurta Suudaan.
Shirkan oo ah mid deg deg ah ayaa waxaa ku baaqay ra’iisal wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn oo ka dalbaday madaxda IGAD in ay soo qeybgallaan kulanka oo ah mid lagu eegi doono xaalada dalka Koonfurta Suudaan.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaan ka qeybgali doonin shirka, taa badalkeedana waxaa la filayaa in ay shirka ka qeybgalaan wafdi ka socda dowladda oo uu horkacayo ra’iisal wasaare Xassan Cali Kheyre.
video Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in Ciidamada DF ay bur buriyeen Xarumo Al Shabaab ku leeyihiin Jubbada Dhexe.
Ra’iisal wasaare Kheyre oo u anbabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya